မိန်းမ ကို နိုင်တာ မကောင်းပါဘူး…ဒါပေမယ့် မိန်းမ ကြောက်တာထက်စာရင်တော့ ကောင်းပါတယ်…ဒါကတော့ မိန်းမ နိုင်နည်း နိသရည်းလေးပေါ့… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Ideas & Plans » မိန်းမ ကို နိုင်တာ မကောင်းပါဘူး…ဒါပေမယ့် မိန်းမ ကြောက်တာထက်စာရင်တော့ ကောင်းပါတယ်…ဒါကတော့ မိန်းမ နိုင်နည်း နိသရည်းလေးပေါ့…
မိန်းမ ကို နိုင်တာ မကောင်းပါဘူး…ဒါပေမယ့် မိန်းမ ကြောက်တာထက်စာရင်တော့ ကောင်းပါတယ်…ဒါကတော့ မိန်းမ နိုင်နည်း နိသရည်းလေးပေါ့…
Posted by johnnydeer on Jan 24, 2013 in Ideas & Plans | 35 comments
အမျိုးသမီးတွေနဲ့ မိန်းမ ကြောက်တဲ့သူတွေ လုံးဝမဖတ်ပါနဲ့…လူပျိုများ..((အထူးသဖြင့် မိန်းမယူခါနီး လူပျိုများ))သာ ဖတ်ကြပါရန်……………………………………………………………………………………………..ဒီနေ့တော့ မိတ်ဆွေများအတွက် မိန်းမ နိုင်နည်း နိသရည်း လေး နည်းနည်း ဝေမျှပေးချင်လို့ပါ…ကျွန်တော့်မှာ မိန်းမကြောက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ နည်းနည်းများတယ်…တချို့က ရှိုတိတ်လေးကြောက်တယ်..သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်လို့ ငါးမိနစ်မကြာဘူး..မိန်းမကဖုန်းဆက်ခေါ်ရော..ဘော်ဒါတွေရှေ့ဆိုတော့ မိန်းမခေါ်တာဆို ၀ိုင်းဟားနေမှာစိုးလို့…ဟုတ်ကဲ့ အမေ..လာပါပြီ အမေ ဆိုပြီး..အမေပဲခေါ်သလိုရောချပြီး ပြန်ပြေးတတ်တဲ့ သူလဲရှိတယ်….နောက်ပြီး..ငါ့မိန်းမက တကယ်တော်တာကွ…ငါ့မိန်းမ ရှာကျွေးနေလို့..နို့မို့ဆို ငါ ငတ်ပြီး ခွေးဖြစ်နေပြီ ဆိုပြီး မိန်းမကို ကြောက်ကြောက်နဲ့တအားအမွှန်းတင်တတ်တဲ့ ဘော်ဒါလဲရှိရဲ့…ငါက ကြောက်တာမဟုတ်ဘူး..ချစ်တာလို့ ရှက်ပြုံးလေးနဲ့ ပြောတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလဲ ရှိရဲ့…တကယ့် အစုံ အစုံပါဘဲ…အမှန်တကယ်တော့ လေပါတီမမြရင်ရဲ့ သီချင်းလို ..((.လင်က မယားကို နိုင်ရင် အလွန်ပဲ လာဘ်တွေတိတ်တတ်ပါသတဲ့..မယားက လင့်အပေါ် အနိုင်ယူပြန်ရင် ဂုဏ်လဲ နိမ့်တတ်ပါတယ်ရှင်…ငရဲ ကြီးတတ်ပါတယ်ရှင်..))..လို့ ဆိုထားသလို တဦးနဲ့တဦး ပြေပြေလည်လည်လေးဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့..ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ ဆိုတာကလဲ အရှားသား…သတိထားမိသလောက် မိန်းမတော်တော်များများ ယောက်ကျားယူပြီးပြီ ဆိုရင် အဲ့ဒီယောက်ကျားရဲ့ ရှိသမျှဟာ အကုန်ပိုင်တယ် လို့ ထင်တော့တာကိုး…၀ါသနာ..အချိန်..ငွေ…စိတ်ဝင်စားမှု…စသဖြင့်ပေါ့…အကုန်သူတို့ဆီမှာပဲ ရှိစေချင်တော့တာကိုး…အဲ့ဒါတကယ့်ပြသနာ…တော်တော်များများကတော့ ချစ်လို့ ယူထားတာပါ…အဲ..ယူပြီး မကြာပါဘူး..မိန်းမတွေကစပြီး..ယောက်ကျားနိုင်ဖို့ အကွက်ဆင်ကြရော…သူတို့ အလွယ်တကူ လုပ်နိုင်တဲ့ဟာ…ဥပမာ ပစ္စည်းလေး ယူခိုင်းတာမျိုး…ယောက်ကျားရေ..အ၀တ်ခြင်းလေးမ ပေးပါဦး…ဆိုတာမျိုးလေးတွေပေါ့…ရှာကြံခိုင်းတတ်ကြတယ်..သတိ..သတိ…လုံးဝမလုပ်ပေးပါနဲ့…နင်လဲ မနိုင်တာပဲ..နင့်ဘာသာနင် မ ပါ့လား…စိတ်ထဲ ပါပါ မပါပါ အဲ့လောက်ကလေးတော့ ပြန်ပြောပေးပါ…အဲ့ဒါဆို ပထမအဆင့် အောင်ပါပြီ…နောက်ပြီး ဒုတိယအချက်…ရှာလို့ရတဲ့ ပိုက်ဆံရဲ့ ၁၀%ပဲ မိန်းမကိုပေးပါ…၈၀% အပ်ရင် ၈၀% ကြောက်ရပြီး …၁၀၀%များအပ်လိုက် လို့ကတော့ သွားပြီပဲ…ကိုယ်က လိုလို့ ပြန်တောင်းသုံးရရင် သူက ငွေရှင် ..ကိုယ်က သူတောင်းစားပုံစံ ဖြစ်သွားတာကတော့ အသေအချာပါဘဲ…ဒုတိယအဆင့် အဲ့ဒီလို လုံးဝ မဖြစ်ပါစေနှင့်…အဲ့ဒီလိုများဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ကတော့ နလံမထူ နထူမလံဖြစ်ပြီသာမှတ်လိုက်တော့ တဘ၀လုံး..တတိယအချက်…..နယ်ဆိုတော့ ဆိုင်ကယ်တွေ ဘာတွေများ အတူတူ စီးရင်..မိန်းမ ၈၀%က ခါးဖက်ပြီး စီးတတ်ကြတယ်…လုံးဝ ခါးဖက် မခံပါနဲ့….ခါးဖက်တာကို ယောက်ကျားတွေက ကြောက်လို့ အားကိုးလို့…ဒီလိုထင်တတ်ကြတယ်…မိန်းမဘက်က ကျတော့ ခါးဖက်တာကပြုတ်ကျမှာ ကြောက်လို့..အားကိုးလို့…ဒီသဘော လုံးဝ မဟုတ်ဘူး…ဒီယောက်ကျားက ငါပိုင် ပစ္စည်းပေါ့…နွားလှည်းကို ကြိုးဆွဲပြီး ကြိမ်တံကိုင်ထားတဲ့ပုံစံသာ ပြေးမြင်ကြည့်လိုက်တော့….အဲ့လို သဘောမျိုး မြို့ပတ်ကြွားတာ…ဘာလဲ …မယုံဘူးလား…မယုံရင် လမ်းမှာတွေ့တဲ့ စုံတွဲရဲ့ နောက်က ထိုင်တဲ့ မိန်းမမျက်နှာပေးကိုသတိထားကြည့်လိုက်…အဲတော့ တတိယအဆင့် ဆိုင်ကယ်စီးရင် ခါးအဖက်မခံပါနှင့်…နံပတ်လေး…အရင်လူပျိုတုန်းကနေထိုင်ခဲ့တဲ့ပုံစံကို အပျက်မခံပါနဲ့..ဥပမာ..သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင် မနက်တိုင်းပုံမှန်ထိုင်တယ်ဆိုပါတော့…ယူပြီးကာစဆိုရင် မိန်းမနဲ့ကြည်နူးပြီး ဒီအကျင့်ကိုဖျက် တလလောက် မိန်းမနဲ့အတူတူတတွဲတွဲနေပြီး အဲ..တလလဲကျော်ရော… သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြန်ထိုင်မယ်ဆိုလို့ကတော့ မိန်းမဆူဆောင့်..စိတ်ကောက်တာ သေချာပေါက်ခံရပြီသာ မှတ်ပေတော့…ဒါကြောင့် နံပတ်လေး ကိုယ့်မူရင်းနေထိုင်မှုပုံစံကို လုံးဝအပျက်မခံပါနဲ့…နံပတ် ၅ …ယူပြီး တလအတွင်း ဘာမဟုတ်တဲ့ အသေးအဖွဲလေးကို စိတ်ကောက်ချင်ယောင်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်…လုံးဝ.မချော့ပါနဲ့…ဒုတိယအဆင့်..မျက်ရည်ကျပြပါလိမ့်မယ်..မျက်နှာလွဲနေပါ..တတိယအချက် အမေ့အိမ်ပြန်မယ်ဆိုပြီး အကျပ်ကိုင်ပါလိမ့်မယ်…အေး..သဘောပဲ လို့ ရဲရဲကြီး ပြောချလိုက်ပါ..ဒါတွေအားလုံးဟာ တကယ် မဟုတ်ပါဘူး…နဖားကြိုးစစ်စစ်တွေပါ…လုံးဝ အထိုးမခံပါနဲ့..အထူးသတိပြုပါ…အချက်၅ချက် အောင်မြင်သွားရင်တော့ မဆိုးတော့ပါဘူး……ကဲ…စာလဲ နည်းနည်းတော့ ရှည်သွားပြီ…ခဏနားဦးလိုက်မယ်…တော်ကြာ ဖတ်ရင်းနဲ့ ပျင်းသွားကြမှာစိုးလို့…အမျိုးသမီးတွေနဲ့ မိန်းမ ကြောက်တဲ့သူတွေ တော်တော် ဒေါပွနေကြပြီလား…ပြောထားသားပဲ မဖတ်ပါနဲ့ဆို…(((ကျန်တဲ့ အဆင့် ၆၇၈၉…၁၀..တွေ ထပ်ရေးဦးမယ်နော်..စိတ်ဝင်စားတဲ့လူပျို များ စောင့်ဖတ်ကြပါရန်)))
အဓိက ကတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နားလည်မှုရှိဖို့ဘဲအရေးကြီးပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အိမ်ထောင်ရေးမှာဆို ငွေရေးကြေးရေးက သူ့ပဲအကုန်ပေးထားတယ်။ ကျွန်တော်လိုသလောက်ကိုလဲ ကြိုက်သလိုယူတယ် ။ သူကလဲ နေ့စဉ်အသုံးစရိတ်ကို ရှင်းပြတယ်။
နောက်ပြီး အားလပ်ရက်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားတွေမှာရှိတာတောင် သူတို့မိန်းမတွေကတော့ ကလေးထိန်းရ လျှော်ရဖွတ်ရ အိမ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရနဲ့ တစ်သက်လုံးနားရက်မရှိတာပါ။ အဲဒါလေးတွေကို ကျွန်တော်တို့က နားလည်မှုပေးပြီး ဝင်မကူနိုင်ရင်တောင်မှ ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာမျိုးလောက်တော့တစ်ခါတစ်လေနားရက်မှာမေးသင့်ပါတယ်။
တစ်ရက်လောက်ဈေးခြင်းတောင်းဆွဲပြီး ဈေးသွားကြည့်လိုက်ရင် ပိုသဘောပေါက်သွားမယ်။
နောက်ပြီး ကိုယ်ချစ်လို့ ယူထားတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကို သူရှိတုန်းမှာ အပြန်အလှန်တန်ဖိုးထားသင့်တယ်။ ကျွန်တော်ဆိုအရင်က မူးလာလို့ရန်ဖြစ်ရင် လက်ကအမြဲပါတယ်။
နောက်ပိုင်းတော့ နားလည်မှုလေးတွေ ထားကြည့်ရင်းနဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကသာယာလာပါတယ်။
လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အခြေအနေချင်း မတူနိုင်တာမို့ 
ကိုယ့်ဇါတ်ညွှန်းကိုယ်ရေးပြီး နိုင်အောင်ကတာ အဆင်ပြေဆုံးပါ
johnnydeer ကို ကျွန်တော်တစ်ခုဘဲ မေးချင်ပါတယ်။
သင်ကော အိမ်ထောင်သည်လားလို့ ? ။
စီမံအုပ်ချုပ်တတ်သူ မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိသူ ဇနီးနဲ့မိသားစုကို ဦးအောင်မှုပြုနိုင်သူ အမျိုးသားများက မိန်းမကို လုံးဝမကြောက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ယခုအချက်တွေက မပြောပလောက်တဲ့အသေးအဖွဲလေးတွေဖြစ်တာရယ် အဆုံးသတ်မှာရေးထားတဲ့ စာ
” အမျိုးသမီးတွေနဲ့ မိန်းမ ကြောက်တဲ့သူတွေ တော်တော် ဒေါပွနေကြပြီလား…ပြောထားသားပဲ မဖတ်ပါနဲ့ဆို…”
ကြောင့် ရယ်စရာအဖြစ် ရေးထားတာက တစ်ကယ်တိုက်ဆိုင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ ဒေါပွလောက်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဟီးဟီး..
” နံပတ် ၅ …ယူပြီး တလအတွင်း ဘာမဟုတ်တဲ့ အသေးအဖွဲလေးကို စိတ်ကောက်ချင်ယောင်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်…လုံးဝ.မချော့ပါနဲ့…ဒုတိယအဆင့်..မျက်ရည်ကျပြပါလိမ့်မယ်..မျက်နှာလွဲနေပါ..တတိယအချက် အမေ့အိမ်ပြန်မယ်ဆိုပြီး အကျပ်ကိုင်ပါလိမ့်မယ် ”
အဲဒါလေးဖတ်မိတော့ မေမေပြောဖူးတာလေး သတိရသွားတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့ မိန်းမက ယောက်ျားအိမ် လိုက်နေရတာထုံးစံကိုး။ အဲဒီမှာဖေဖေ့အိမ်မသွားခင် မေမေ့ရဲ့အဖေက မေမေ့ကိုတစ်သက်စာ တစ်ခါတည်း မှာလိုက်တယ်တဲ့။ လင်မယားဆိုတာ လျှာနဲ့သွားလိုပဲ ရန်ဖြစ်တဲ့အခါလည်းရှိမယ်။ အဲဒီလိုရန်ဖြစ်တဲ့အခါတိုင်း မိဘအိမ်ကိုဆင်းလာတာမျိုးလုံးဝလက်မခံဘူး။ ငါတို့အမျိုးထဲမှာ အိမ်ပေါ်ကဆင်းတဲ့သူတစ်ယောက်မှမရှိဘူး ထုံးစံလည်းမရှိဘူး။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အိမ်ပေါ်ကဆင်းမယ်ဆိုရင်လည်း ဆင်းမလာခင် သေချာစဉ်းစား လုံးဝပြတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆင်းခဲ့ အဖေစောင့်ရှောက်မယ် ဆင်းလာပြီးရင်တော့ ယောက်ျားအိမ်ကိုပြန်တက်ဖို့မစဉ်းစားနဲ့ အဲဒါကြောင့် တစ်ကယ်မပြတ်နိုင်ပဲနဲ့ဆင်းမလာခဲ့နဲ့လို့ တစ်ခါတည်း အပြီးမှာလိုက်တယ်တဲ့။ မေမေကတော့ တစ်ခါမှ အဲဒီလို အမေ့အိမ်ပြန်မယ်ဆိုတာမျိုးပြောတာမကြားဖူးသလို ရန်ဖြစ်ရင်လည်း ကျမတို့တွေ အိမ်းနီးနားတွေ မည်သူမျှမသိရပါဘူး။ စကားမပြောကြတာကို သတိထားမိလို့သာ ရန်ဖြစ်ထားမှန်းသိတာမျိုးပါ။ ကျမသိသလောက်တော့ မမေက ဘယ်အရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖေဖေစိတ်ချမ်းသာဖို့အဓိကပဲ။ ဖေဖေသွားချင်တဲ့နေရာ လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကို မဟန့်တားဘူး မကြည်မဖြူမလုပ်ဘူး။ ကွယ်ရာမှာရော ရှေ့မှာရော အပြစ် မကောင်းကြောင်း ပြောတာမကြားဖူးခဲ့ဘူး။ ဖေဖေကလည်း မဟုတ်တာ မကောင်းတာ ဘာမှမလုပ်တော့ ပြောစရာ ဟန့်တားစရာမရှိ မလိုတာကြောင့်လည်းပါမှာပေါ့။ ၂ ယောက်လုံးကလည်း ဆွေရေးမျိုးရေးကအစ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မသိအောင် လုပ်တဲ့ကိစ္စမျိုးလည်း မရှိဘူး။ မဆိုင်တာတွေပါပြောမိလို့ စာရှည်သွားပြီနော်…
ကျုပ်ကတော့ ချစ်ချင်လို့ မိန်းမယူထားတာ
တစ်ဖက်သက် အမြင်နဲ့ မကြည့်ကြပဲ
နှစ်ဖက်အမြင်နဲ့ကြည့်ပြီး နားလည်အောင်ညှိကြတာ အကောင်းဆုံးပါလို့
ကို johnnydeer က မိန်းမ ကြောက်ပုံရတယ် … (ချိတ်ချိုးပါနဲ့ နှော်.. နောက်ထှာပါ)
ဒါ့ကြောင့် သူ့ရဲ့ မကျေနပ်ချက်တွေကို ဒီမှာ ချရေးနေတာထင်ပါ့ …
ဘယ်အရာမဆို ကိုယ်ထင်ကုတင်ခြေလေးချောင်းပေါ့ ဗျာ …
ကောင်းတဲ့ဘက်ကလှည့်တွေးရင် ကောင်းတာဖြစ်လာသလို …
မကောင်းတဲ့ဘက်က မကောင်းတာ တွေးရင် မဟုတ်တာဖြစ်လာနိုင်တာပဲ နော် … :hee:
အရေးကြီးဆုံးကတော့ နားလည်မှုပါ .. ကောင်းသည်ဖြစ်စေ မကောင်းသည်ဖြစ်စေ …
နားလည်မှု ရှိရင် အရာရာ အောင်မြင်နိုင်ပါတယ် ….
လိုရာဆွဲပြီးရေးထားပါတယ် ဗျို့ … ဟို့ဟို့ .. ဟို့ … အူးလေးပေးတဲ့ နည်းတွေ အတိုင်းသာ ရွာထဲက လင်မယားတွေ ကျင့်သုံးကုန်လျှင် ..အားလုံး တခုလပ်တွေ ၊ တလင်ကွာတွေ ဖြစ်ကုန်တော့မယ် … ခိခိ ..
ရွာသူရွာသားတို့ချင့် … အပိုရီး ကျွန်မက ..စိတ်ရင်းစေတနာနဲ့ တထုပဲ ကြောချင်ပါဒယ်ချင့် …
အိမ်မပိုင်ပဲ ၀က်မမွေးကြပါနဲ့ ယို့ … တူညား တားတမီး ယူထားလျှင် … သားမှတ်မှတ် မယားမှတ်မှတ်ပေါင်းဖို့ ကြိုးစားဂျဘာလို့ .. အဲ့လိုမှ မဟုတ်လျှင်လည်း … ရဲဇားပဲထား ….. အိမ်ထောင်မပြုဂျဘာနဲ့ယို့ …… ။
ယူပြီးမှ စားပြီးနားမလည် ၀ါးပြီး ထွေးထုတ် ၊ တခုလပ် ဖြစ်စေတဲ့ … အကျင့်လေးတွေပြင်လို့ …. လူလိုအသိဥာဏ်ချိကြပါလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်ချင့် ….. ။ အဲဗရီးဘာဒီ ဖလိုင်းကစ် … ခွိခွိ :harr:
အိမ်ပေါ်က ဆင်းတာနဲ့ အကြပ်ကိုင်တဲ့ မိန်းမတွေ တော်တော် မှားတယ်..
အမှန်က အိမ်ပေါ်က ဆင်းမယ် ပြောပြီး ဆင်းသွားရင် သူ ပြန် လိုက်ခေါ်ဖို့ ကိုယ် မျှော်ရတော့မယ်.. တော်တော် နဲ့ လာမခေါ်ရင် စိတ်တွေဆိုး… စိတ်တွေ ညစ်ပြီး ကိုယ့်အထုတ် ကိုယ်ဆွဲ ပြန်တက်ရင်လည်း ရှက်စရာကလည်း ဖြစ်အုန်းမယ်။
ဆင်းသွားတဲ့ အတွက် အိမ်မဟုတ်တဲ့ အတွက် နေရထိုင်ရတာ အဆင်မပြေမှုတွေ ရှိတာတွေ ရှိလိမ့်မယ်။
လင်မယား ရန်ဖြစ်ရင် မိန်းမတွေ အိမ်ပေါ်က ဆင်းမည့် အစား ယောကျား ကို သာ အိမ်ပေါ်က နှင်ချ လိုက်ပါ..
နောက်မှ သနားလို့.. ရှင် အိမ်မှာ မဟုတ်တော့ နေရတာ စားရတာ ဘယ် အဆင်ပြေမလဲ.. ကျွန်မ ခွင့်ပြုပါတယ်.. ပြန်လာခဲ့ပါလို့ ခပ်တည်တည် နဲ့ အထက်စီးက ပြောယုံပဲ..
ဒါ သဘောလောက်ပဲ ရှိသေးတယ် ပြောပြတာ.. ဟဲဟဲ.. (ခရက်ဒစ် တူ အဘဖော)
ဟိုအာကိုယီးတော့ တနားပါတယ်. .
ဂလိုစာဒေ ပညာဒေ ကျိကျိမမြင်ဇီယ ..အုံဖွ
ပုခတ်လွှဲသောလက်သည် ဂဘာကြီးကို လွှမ်းမိုးနိုင်ရမြီ….. :har:
ရို့…. ရို့… ရို့… ရို့ …
အစ်မဆူး …..ယောကျာ်း နိုင်နည်းစာအုပ်ထုတ်ပါဗျို့ … ခိခိ …
စိတ်ကူး ယဉ်ပြီး နောက် ရေးထားတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရှိရင် မိန်း မကို ကြောက် ရလို့ ၊ ဒါမှ မဟုတ်လည်း အသက် ၃၅ ကျော်လာတာတောင် ဂေါ် မစွံ သိုးနေတဲ့ လူပြို ကြီး ဖြစ်နေ လို့ သာ ဖြစ်ချင်သည် များ ကို ရင် ဖွင့် သည်ဟု ယူဆမိပါသည်။ ဝေဖန်တာ ချိတ် အချိုး ရဘူးနော်။
အိမ်ထောင်ရေး သာယာခိုင်မြဲ ဖို့က ပုံသေနည်း မရှိတဲ့ နားလည်မှု ( တစ်စုံတွဲနဲ့ တစ်စုံတွဲ လိုအပ်တဲ့ နားလည်မှုချင်း မတူပါ။) နဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ညှိ နှိုင်း အဖြေရှာ သွား ရ မှာပါ။ အဲဒီ အပေါ် အပြင်လူရဲ့ အမြင်မှာ မိန်း မက နိုင်တယ်၊ ယောက်ျား ကနိုင်တယ် လို့ ထင်နိုင် ပေမယ့် ကယယကံရှင် တွေ အဖို့ အဲဒိ ခံစားချက်မျိုး မရှိပဲ ကျေနပ် တယ်ဆိုရင်ပြီးပြည့် စုံ တဲ့ အိမ်ထောင်ရေး လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ အမှန်တကယ်လည်း သူတို့ ၂ ဦးကြား အားသာချက်၊ အားနည်း ချက်တွေ သူတို့ ကလွဲလို့ကိုယ် မှမသိနိုင် မမြင်နိုင်တာ။
စကား မစပ် အဲဒီနှစ် အမ်အိုင်တီ က ပြီးတဲ့ ထဲမှာ အသိတွေ တော်တော် ရှိတယ်။
ကဲ ကဲ ဂျီးဒေါ် အိတုန်နဲ့  ဖွားဆူး တိုကလည်း
ယောက်ကျားနိုင်နည်း အားကျမခံ ပြန်ရေးပါလားဗျ
ယောက္ခမချင့် .. ယောကျာ်းအရင်(တားတားလေးနဲ့) ပေးချားပါ .. ပြီးမှ ရေးပေးပါဦးမယ် … ခိခိ …
ကလေး လင်မယားလုပ်တမ်း ကစားတာ ကျနေတာဘဲ….
ဘာဘဲဖစ်ဖစ်… ယောကျာင်္းကို နိုင်စားတာလဲ မကောင်းဘူး…
မိန်းမ ကို နိုင်စားတာလဲ မကောင်းဘူး…
အိမ်ထောင်တစ်ခု စာနာ နားလည်မှုတွေနဲ့ တည်ဆောက်နိုင်မှ တည်မြဲမယ်…….
ကဲ..ကဲ..စာရေးသူကိုယ်တိုင် ရှင်းမှ ရတော့မယ်နဲ့တူတယ်…ဒီစာကိုရေးရင် ၀ိရောဓိ ဖြစ်စရာတွေ အများကြီး လာကြတော့မယ်ဆိုတာ သိပြီးသားပါ…ဒါကြောင့် ခေါင်းစဉ်မှာ မိန်းမ ကို နိုင်တာ မကောင်းပါဘူး…ဒါပေမယ့် မိန်းမ ကြောက်တာထက်စာရင်တော့ ကောင်းပါတယ်…လို့စပြီး စကားခံရတာပေါ့ဗျာ…နောက်ပြီး အစရေးကတဲက အမျိုးသမီးတွေနဲ့ မိန်းမ ကြောက်တဲ့သူတွေ လုံးဝမဖတ်ပါနဲ့…လူပျိုများ..((အထူးသဖြင့် မိန်းမယူခါနီး လူပျိုများ))သာ ဖတ်ကြပါရန်..လို့အထပ်ထပ် လုံအောင် ကာကွယ်ထားပြီး အမျိုးသမီးတွေနဲ့ မိန်းမ ကြောက်တဲ့သူတွေ တော်တော် ဒေါပွနေကြပြီလား…ပြောထားသားပဲ မဖတ်ပါနဲ့ဆို..လို့ဆိုပြီး ရှယ်ပိတ်ထားတယ်နော်…ရေးတဲ့သူထက်ကို ဖတ်တဲ့သူ လွန်တာနော်…(အလကား စ တာပါဗျာ)…ဒီစာကို ရေးတဲ့ အကြောင်းအရင်း ရှင်းပြပါ့မယ်…တ၀က်ကတော့ အပျော်ရေးတာပါ…တ၀က်ကတော့ အတည်ရေးတာပါ…တ၀က်အကြောင်းစ ရှင်းပြမယ်…အပျော်ကလေးနဲ့ တွေးဖတ်လိုက်ရင် ရီစရာလေးပေါ့ဗျာ…ဘယ်သူမှလဲ မထိခိုက်ပါဘူး…နည်းနည်းလေးပြုံးရလဲ မနည်းပါဘူး ဆိုတဲ့ စေတနာလေးနဲ့ ရေးလိုက်တာပါ…ကျန်တဲ့ တ၀က် အတည်ရေးတာကလဲ တကယ်ပါပဲ…တချို့ ယောက်ကျားတွေက ဘာသဘောလဲတော့မသိဘူး…မိန်းမကြောက်တာကို လူရှေ့ သူရှေ့ ခဏ ခဏ ပြောတတ်တယ်…ဘယ့်နှာဗျာ..ရှက်စရာကောင်းတာကို ဘာလို့ပြောကြလဲ မသိဘူး…မိန်းမက ပါး၁၆ ချက် ရိုက်တာကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ပြောတတ်တဲ့ သူလဲ တကယ် တွေ့ခဲ့ဘူးတယ်…အဲ့လိုလူတွေကို ရွဲ့ပြီးရေးချင်တာလဲ တကြောင်းပါတယ်…နောက်တခုက မိန်းမဆိုတဲ့အမျိုးက တအား ဂရုစိုက်ခံချင်တယ်…ဂရုစိုက်ရင်း…ဂရုစိုက်ရင်းနဲ့ပဲ ယောက်ကျားလုပ်တဲ့ သူက ဘော်ဒါတွေကြား…ကိုယ့်မိသားစုကြား…လူမှုဆက်ဆံရေးတွေ လစ်ဟာကုန်တာတွေ မဖြစ်အောင် နဲနဲတော့ နိုင်ထားသင့်တယ်ထင်တာပဲဗျို့..ကျွန်တော့်အမြင်ပြောတာပါ….ကျွန်တော်ကတော့ ရှင်းရှင်း နဲ့ ဗွင်းဗွင်းပဲ ပြောတတ်တယ်…ယောက်ကျားက မိန်းမကိုနားလည်…
မိန်းမက ယောက်ကျားကို ပြန်ပြီးနားလည်…စာရွက်ပေါ် ရေးလို့တော့ ကောင်းတာပေါ့…
အမှန်တကယ်သာ ဒီလို နားလည်ကြရင်တော့ လောကကြီးပျော်စရာပေါ့ဗျာ…ဖြစ်ကြပါစေ..ချစ်ကြပါစေပေါ့…မေးထားတာလေးလဲ ဖြေပေးဦးမယ်ဗျုိ့…ကျွန်တော်က အိမ်ထောင်သည်ပါ…ကလေး တစ်ယောက်နဲ့တဗိုက်ပါ…မိန်းမကိုလဲ နဲနဲတော့ နိုင်ပါတယ်…တရားလွန်တော့ အနိုင်မကျင့်တတ်ပါဘူး…မိန်းမက ချစ်လွန်းလို့ တကောက်ကောက် လိုက်လွန်းလို့တောင် စိတ်ပျက်နေရတာပါ…ဘာမှလဲ ဖုန်းကွယ်မထားတတ်ပါဘူး…ဘီယာသောက် ပြန်လာလဲ ပြောပြတာပဲ…အရက်သောက် ပြန်လာလဲ ပြောပြတာပဲ…မာဆပ်သွားလဲ ပြောပြတာပဲ…စင်တင်သွားလဲ ပြောပြတာပဲ…ကိုယ်လဲ လိပ်ပြာလုံ..ဘာပြသနာမှလဲ မတက်ဘူးဗျို့…ရှေ့မှာကြောက်ချင်ယောင်ဆောင် ကွယ်ရာမှ အဆုံးစွန်ပေါက်တတ်ကရ လုပ်တဲ့သူတွေပဲ အိမ်ထောင်မမြဲတတ်တာဗျို့…ကိုယ်တွေ့..ကိုယ်တွေ့…
သြော် အိမ်ထောင်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ အတွေ့အကြုံအရ ရေးတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြီဗျာ။
johnnydeer ဆိုလိုချင်တာလည်း မှားတယ်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး ရှိတတ်ပါတယ်၊ ၀န်းကျင်မှာလည်း
ရှိလည်းရှိတာတွေ တွေ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဗျာ အိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်လာမှတော့ အနိုင်ယူတာထက် သရေဘဲ ကစားနိုင်ကြရင် အကောင်းဆုံဘဲပေါ့ဗျာ။
မမဆူး နဲ့ မပန်ပန် တို့ရဲ့ အမျိုးသားတွေ ( မပန်ပန်ကတော့ နောင်ရှိလာခဲ့ရင်ပေါ့ ) ကိုတော့ ခင်ခ က မိတ်ဖွဲ့ထားချင်တယ် သူတို့အိမ်ပေါ်က နှင်ချခံရတဲ့အခါ ကူညီသင့်တာကူညီလို့ ရအောင်လို့ပါဗျာ။
အတွင်းက မီး အပြင် မထွက် စေနဲ့ ဆိုသလိုပေါ့.. လင်မယား ရန်ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စ ပတ်ဝန်းကျင် သိအောင်လည်း မလုပ်ပါဘူး ဒီ အတွက် အိမ်ပေါ်က နှင် မချ ပါဘူး.. စိတ်မပူပါနဲ့.. ရန်လည်း မဖြစ်ပါဘူး။
ကိစ္စ တိုင်းမှာ အဖြေ ရှိတယ် ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ ပြန်ရေးလိုက်တာပါ..
တကယ်လည်းနှင် မချ မှန်းသိပါတယ်ဗျ။
ယောက်ျား ကို နိုင်တာ မကောင်းပါဘူး…ဒါပေမယ့် ယောကျာ်း ကြောက်တာထက်စာရင်တော့ ကောင်းပါတယ်… ဒါကတော့ ယောက်ျား နိုင်နည်း နိသရည်းလေး..
အင်းးးးးးးးးးးးး အခုပို.စ်ရေးတဲ့သူက မိန်းမနဲ.ကွဲနေတဲ့သူဖြစ်ရမယ်………
ဘယ်နှယ့်ဗျာ ချစ်လို.ယူထားပါတယ်ဆို သူနိုင်ကိုယ်နိုင် အပြိုင်ကြဲရင် မိသားစုဘ၀လေး ဘယ်ရမလဲဗျာ..နော…
ဆိုတော့ကား…….မိန်းမနဲ.ကွဲနေတဲ့အာကိုဂျီးလဲ ကိုယ့်မိန်းမကိုယ်ချော့ပြီး ပြန်ပေါင်လိုက်တော့…..ဟိဟိဟိ
မိန်းမယူထားတာမကြာသေးဘူး ဘယ်နှယ့်အေ စိတ်ဓာတ်ကျအောင်လာပြောနေတယ်…ဟွန်.
ယောက်ျားကိုပဲရွေးချယ်ပါတယ်။ အဝတ်လေးကူလျော်တာ အပြန်အလှန်
ညောင်းတဲ့အခါ နှိပ်နယ်ပေးတာ ရတဲ့လစာအကုန်အပ်ပြီးမိန်းမကို
ဒါ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့်လို့ပဲထင်ပါတယ်။ ခုဖုန်းနဲ့မန့်နေလို့ စာ
ရိုက်ရတာအားရဘူးရယ်။နောက်မှအေးအေးဆေးဆေး ပိုစ့်တစ်ပုဒ် သဂျီးမြှောက်ပေးသလို ရေတင်အုန်းမယ်။
အောင်မြတ်လေး…ရွာထဲကို ဓမြ၀င်တိုက်သလို အုံးအုံးကျက်ကျက် ကို ဖြစ်သွားတာပဲ…သတိပေးထားသလို မိန်းမ ယူခါနီး လူပျိုတွေပဲ ဖတ်ကြရင် ဘာမှ ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး…အခုတော့ အကုန်လုံး အလုပ်ရှုတ်သွားကြပြီထင်တယ်..ဒီဂေဇက်မှာရေးသမျှထဲတော့ ဒီပို့စ်ကို ရေးရတာ အပျော်ဆုံးပဲ ဗျို့…မန့် သူအပေါင်းအားလုံးလဲ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း…
ဆက်လက် ရေးပါဦးမည်ဟုလည်း ဆိုလိုက်ပါကြောင်း…
အဲဒီ မိန်းမတွေ အလှဆို တာ ကြီးက
တော်တော် စားတယ် ဗျ။
ဘာကြီးညာကြီး ဘာမှ မသိဘူး။
သွားနဲ့ ခံတွင်း သာ အဓိက လို့ မြင်တယ်။
စော်လေးတွေ တွေ့ ရင် သွား ကို အရင် ကြည့်မိတယ်
ပုလဲ သွယ်လေးလို ဖွေးနေရင် ပထမအဆင့် အောင်ပြီ
သွားလေး နဲနဲ ခုံး ရင် ပိုကောင်း
ပြီးတော့ ခံတွင်းနံ့…အာပုပ် မပုပ် က အရေးကြီးတယ်။
ဘယ်လောက် တောင့် တောင့် ဖြောင့် ဖြောင့်
ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ရေ ဆေး ငါး ဘဲ ပြောပြော
လုံးကြီးပေါက်လှ မြစ်စို့ ကြီး လို့ ဘဲ ဆိုဆို
ရွှေ ဘို မင်း ကြိုက် မင်းကြီး ကြိုက် ဖြစ်ဖြစ်
ငါးညှီ နံ့ လိုလို ညှီ စို့ စို့ အနံ့ ကြီး နဲ့ ဆို
ဘယ်လို ကြူ မတုန်း
နမ်းဘို့တော့ ဝေး သေး
Foreplay လဲ Good Bye ပါဘဲဗျာ….
သွားမကောင်းရင် ကျန်းမာရေးပါ မကောင်းနိုင် ဘူး
ဒါ က Long Term Investment လေ ဗျာ..ဟုတ် ဘူးလား
တင် တို့ ရင် တို့
လက်ချောင်း ခြေချောင်း လေးတွေ
အသားအရည် ..ဘာညာ ကြည့်တာ
How She carries herself လေ
တစ်ချို့ က ရီ ရင် ဒရက် ကူလာ ကြနေတာ ကြောက်စရာကွယ်..
တစ်ချို့ က စကား ကိုတောင် စဉ်ရေမရပြောတာ
အရူးချေးပန်း . ..ဘာနားထောင် ရမှန်း ကို မသိဘူး…..သေရော
စားရင်လဲ မြိုနေသလို နင် နေသလို…
ရီလိုက် ရင် ခွက် ထိုးခွက် လန်
သွားရည်တွေ ကျ တဲ့ အခါ ကျတယ်..ဂွီပဲ
ပြီးတော့ အနေအထိုင် ညစ် ပတ် တာ ကရော
ထမိန် ကို အပျို စင် ဆို ပြီး ကွင်းလုံး ပုံ ချွတ်တာ
ဘဲနဲ့ ကြူ ရင် များ ကိုကို ကိုကို အသည်း အချစ် အသက် နဲ့
မိဘ ကို နုတ် လန် ထိုး ငါးစိမ်းသည် မ ကြီး လိုကရှိသေး
မနက် စောစော ထ ရင် မျက်နှာ ကြီး ပုပ် ပွ ပြီး
ဟိုလူ့ အော် ဒီလူ့ရမ်း နဲ့
ဘုရားရှစ်ခိုး ပန်းရေချမ်း ကပ် အမျှဝေတတ်မှပေါ့ လို့
သန့် တယ် ဆို တာ ကလေ…
ကိုယ် နူတ် အမူယာ ၃ ပါး လုံး နဲ့ ဆိုင် တယ် ဗျို့
မိန်းမ ယူရတာ လွယ်တယ် မှတ် လို့
ကိုယ်ဖာရင် သိတ် စွံနေ တယ် ထင် မနေ ကြပါနဲ့ ကွယ်
ညီးတို့ ကလဲ သိတ် လှ နေတယ် မထင် ပါနဲ့
ကိုရင်လေးစည် ဘဝ မှ ဦးပဉ္ဇင်းစည် ဘဝ ကူးပြောင်းစေသတည်း။
နိုင်တယ်ဆိုတာ မကောင်းပါဘူး နားလည်မှုရှိမှ အိမ်ထောင်ရေးခိုင်မြဲ
ယောကျာင်္း ကို ဘယ်တုန်းက မှ အိမ်အလုပ် မလုပ်ခိုင်းဘူး။
ယောကျာင်္း ကို ဘယ်တုန်းက မှ ခလေးကူထိန်းလို့ မပြောဖူးဘူး။
ယောကျာင်္း ကို ဘယ်တုန်းက မှ အပြင်သွားရင် အထုတ်အပိုး မဆွဲခိုင်းဘူး။
ယောကျာင်္း အမျိုးတွေကို ဘယ်တုန်းက မှ စေတနာမဲ့ စကား မပြောဖူးဘူး။
ယောကျာင်္း ကို ဘယ်တုန်းက မှ အဖိုးတန် ပစ္စည်းတွေ ဝယ်ပေးဖို့ မတောင်းဆိုဖူးဘူး။
ယောကျာင်္း နဲ့ တန်းတူ စကားပြောလို့ ရအောင် အမြဲရှိပေမဲ့ ယောကျာင်္း ကို ဘယ်တုန်းက မှ ချွဲနွဲ့ မနေဖူးဘူး။
ယောကျာင်္း ကို ဘယ်တော့မှ မယုံသကာင်္ဝန်တို စကား မပြောဘူး။
ယောကျာင်္း ပိုက်ဆံအိတ်/ Bank Account ကို ဘယ်တော့မှ မစစ်ဘူး။
ယောကျာင်္း ကို ဘယ်တုန်းကမှ စိတ်မကောက်ခဲ့ဖူးဘူး။
ယောကျာင်္း ကို သူစိတ်ညစ်ချိန်မှာ အားပေးဖို့ အမြဲရှိတယ်။
ယောကျာင်္း ကို နိုင်တယ်လို့ ပါတ်ဝန်းကျင်က ပြောတာ မခံခဲ့ရဘူး။
ကျွန်မ က အင်မတန် အငြင်းသန် သူကို ရထားတာ။
ဒါပေမဲ့ အပြင်းအထန် ငြင်းခုန်ကြပြီဆိုရင် ကျွန်မ အမြဲ အနိုင်ရတယ်။
ဒီတော့မိန်းမ နိုင်ချင်ရင် ယောကျာင်္းနေရာမှာ မိန်းမ လို့ ထည့်ဖတ်ကြ။
ကိုယ့်ကိုနိုင်မဲ့သူကို ကိုယ်ရွေးထားပြီးမှတော့ …. enjoy with it.
ယောကျာ်းနိုင်နည်းကိုလဲ စောင့်မျှော်အားပေးလိုပါကြောင်း သို့မှသာလျှင်
မိန်းမယူနည်းလေးဘာလေးလဲ သိတဲ့လူရှိရင် တင်ပေးကြပါအုံးးးးးးးးးးးးး
မိန်းမ ကို အရင်ကထက် ပိုချစ်စေချင်ရင်
ကိုယ့်ကို တစ်ကယ်ကို အားကိုးစေချင်ရင်
ကြက်ဥ+နွားနို့နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ပူတင်း ၊ ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီး မှည့်မှည့် အနဲဆုံး ၁လုံး
ကျုပ်ပြောမှာ ကပေနဲ့ ဗျောင်းဗျံ… မိန်းမရရင် ဟိုဟာ လုံးဝ မလုပ်ပါနဲ့၊ သိတယ်နော် ဟိုဒင်း၊ အဲဒါ ရှောင်ပြလိုက်ပါ။ ဟိုဥစ္စာဖြစ်လာရင် အဲလိုမရဘူးလို့ အင်းမလုပ် အဲမလုပ် အင်တင်တင် နေပါ။ မနေနိုင်ရင် တူနဲ့ထု၊ စားပွဲကိုပြောပါတယ်။
စာရေးသူကြည့်ရတာ ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့သင်တန်းဆင်းထားတာ ဖြစ်မယ်။
ဟားဟား ……အခုခေတ်က 2013 ဖြစ်နေပြီနော်…
ပြီးတော့ မိန်းမနဲ့ယောက်ျားကလဲအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ကြောက်စရာမလိုပါဘူးလို့ထင်တာပဲ ….
ကျွန်မလည်း အရီးခင်လတ်နဲ့ ထပ်တူပါဘဲ
တခုပါဘဲ သူအငြင်းသန်ပေမယ့် ကျွန်မက ပြိုင်မငြင်းပါဘူး
မိန်းမက အိမ်ပေါ်ကဆင်း ဆိုပြီး မောင်းချရင် အကောင်းသား လွတ်ပြီကျွတ်ပြီပေါ့ အိမ်က ဟာမကြီးကတော့ ရန်ဖြစ်နေရင် အိမ်ကိုသော့ခတ်ပြီးမှ အသေရန်လုပ်တာ အိပ်ရာထဲဝင်လဲ ပူညံပူညံ အိမ်ပြင်ထွက်ဖို့ကလဲ သော့ကမရှိ ဟဲ …ဟဲ ဖက်နမ်းလိုက်တော့လဲပြီးတာဘဲ …ဘာလုပ်တာလဲ မီးပိတ်အုံးလေတဲ့ ဟင်း ဟင်းဟင်း ငြီမ်သွားရော ကိုယ့်လူတို့ ရန်ဖြစ်ရင် ချော့လို့အလွယ်ဆုံးက အားရပါးရ ဖက်နမ်းတာက okပါ အိုကေပါ စမ်းကြည့်ကြပါအုံး ဒါပေမဲ့ မိန်းမတွေက အမြဲရန်ဖြစ်ချင်နေမှာနော်